Iphupha malunga ne-Acupuncture ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
Ukwenza i-acupuncture kuqondwa njengenxalenye yamayeza emveli amaTshayina. Ithatha ukuba i-Qi, amandla abalulekileyo emzimbeni, ihamba ngeendlela ezichaziweyo, ezibizwa ngokuba zi-meridians, emzimbeni.
Qi ikwachaphazela ulawulo lwayo yonke imisebenzi yomzimba. Ukuba isifo siyabonakala, sinxulunyaniswa nokuphazamiseka kokuhamba kwamandla. Ukulungisa ukuhamba okungahambi kakuhle kweQi kunye nokubuyela kukuhamba okugudileyo kwamandla obomi, iintonga zenaliti ngoku zenziwa kwiindawo zokulungisa izilwanyana ze-meridians.
1 Uphawu lwephupha «i-acupuncture» -ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «i-acupuncture» -ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «i-acupuncture» -ukutolikwa kokomoya
Uphawu lwephupha «i-acupuncture» -ukutolikwa ngokubanzi
Uphawu lwephupha "acupuncture" lutolikwa kutoliko lwamaphupha ngokubanzi kuthetha ukuba iphupha eli liye laqonda ukuba ingxaki yezempilo kwaye ufuna ukuphiliswa. Kude kube ngoku bendicinezele le ngxaki yezempilo kuyo el mundo ukuvuka okanye khange kwamkelwe. I-subconscious yakho ikuthumela umqondiso ocacileyo ngephupha lakho lokuba ekugqibeleni kufuneka ujongane nobunzima bakho.
Ukuba iinaliti ziphambili kakhulu ephupheni lokugcoba, banako, ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha, babe luphawu lobudoda lweminqweno yesondo yephupha. Kwakhona, iinaliti ze-acupuncture zifanekisela ukulala. Amandla okuphilisa. Kubalulekile ukuba ukuphupha ngokwakho kwenza i-acupuncture ephupheni okanye ufumana unyango.
Ukuba umphuphi yi-acupuncturist ephupheni, eli phupha likubonisa ukuba unakho kwihlabathi lokuvuka lokunceda nokuphilisa abanye. Ngakolunye uhlangothi, ukuba ufumana i-acupuncture ephupheni, uphawu lwephupha lubonisa kule meko ukuba iphupha kufuneka libuyiselwe ngabanye abantu. Isenokuba luncedo ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni.
Ukuba iphupha livakalelwa ngexesha lokucocwa komzimba kwiimvakalelo zentlungu yokulala, oku kuyaqonda ukutolikwa ngokubanzi kwephupha njenge uphawu oluhle ngeenjongo zeshishini. Kwakhona, uphawu lwephupha lunokubonisa ukuba ukuphupha kunokuguqula imeko embi ibe yinto elungileyo.
Uphawu lwephupha «i-acupuncture» -ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, ukwenza i-acupuncture njengophawu lwephupha ekuqaleni kubhekisa kukulala. Amava abuhlungu kwihlabathi elivukayo. Nangona kunjalo, la mava aya kwenza iphupha livuthwe ngakumbi kwaye lilisebenzise nakwixesha elide. Kungenxa yokuba ngale ndlela ufunda ukujongana neengxaki kwaye emva koko unokusebenzisa olu lwazi kweminye imicimbi.
Uvakalelo olomeleleyo lweentlungu ezinxulumene nokwenza i-acupuncture ephupheni, ngokutolikwa kwengqondo ngephupha, ukwenzakala engqondweni Iingoma. Mhlawumbi ukuphupha kuye kwafumana nje ukuphoxeka okanye ukwaliwa. La mava abuhlungu kakhulu kangangokuba uziva iintlungu nasemaphupheni.
Ukuba ukuphupha kuyazibonela ephupheni kuneenaliti ezininzi zokwenza i-acupuncture, le meko yephupha ngamanye amaxesha inokubonisa ukuba ukuphupha kukuziva kunqabile kumacala amaninzi kwihlabathi elivukayo.
Uphawu lwephupha «i-acupuncture» -ukutolikwa kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, uphawu lwephupha "acupuncture" lumele umnqweno wephupha ngokwakho. amandla okuphilisa ekufuneka ikunike umbono oguqula ubomi.